I-737 Classic ingxaki yeepakethi ezininzi
umbuzo I-737 Classic ingxaki yeepakethi ezininzi
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #826 by deckerb
Yithande le phakethi, ngokukodwa izandi ezibonakalayo, ukukhanyisa kwepoppit kunye nokunye.
Kubonakala kubakho umba kunye nayo ngokukhawuleza iqhutywe malunga nendawo yokubeka kwindawo yokunyuka. Kwakhona ukugxilwa kwi-rollout yokuthatha isantya ngokukhawuleza ukukhawuleza, kunye okanye ngaphandle kwe-auto. Ixesha elinzima ukufikelela kwi-140 kumqulu wokuthatha. Ukuqwalasela ezinye zezimvo kwiphepha lokukhuphela, andiyena yedwa lo mbandela.
Naluphina ulwazi malunga nokulungiswa okanye umsebenzi oza kuluxabisa.
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-3 inyanga edlulileyo deckerb. Isizathu: Amagama alahlekileyo
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #827 by xHobbit420x
Google kwaye ukhupha iphakheji ye-164 ye-737.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #828 by deckerb
Siyabonga kodwa kungekhona. I-737 engagqibekanga ayinayo izithuthukisi eziphambili zepakethe.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #829 by bencas
Uzame ukusetha ithebhu ye-trim ibekwe kwii-1.7-1.8 degrees ezimele zilungise ngokukhawuleza i-angle angle.
1 unyaka we1 iveki edlulileyo - 1 unyaka we1 iveki edlulileyo #939 by DRCW
Le yesihlandlo sesibini ndiyifunde ngale ngxaki, kubonakala ngathi akuyiyo imbambano yokuba i-737-800 ingxaki kunye nesizukulwana esidala sale modeli. Kulula kakhulu ukulungisa ... Yiya kwi CFG ifayile yeenqwelo, kwaye uphelele phantsi ukuya kwicandelo le [[Injini] jonga umgca Static_Thrust = Sitshintsha umlinganiselo we-4000 Example xa ufunda Static_Thrust = 22980 Yongeza iiplani ze-4000 ze-thrust ukuze zifunde Static_Thrust = 26980 ugcine. Ndicinga ukuba uya kuyifumana isebenza kakuhle.
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we1 iveki edlulileyo DRCW.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: isidel
1 unyaka we1 iveki edlulileyo #948 by misshu
Kuphi kwiifayile yiCFG? Ndizama ukuyifumana kwaye andinakubonakala ngathi ndikufumanisa
1 unyaka we1 iveki edlulileyo - 1 unyaka we1 iveki edlulileyo #949 by DRCW
Sawubona, Nceda ucofe kwi icon yakho yeefestile okanye qalisa kwicala elisekhohlo leskrini sakho, uye kwikhompyutheni, khetha iC drive C / inkqubo x86, microsoft, kufuneka kubekho ifayile FSX, uyivule kwaye kukho uluhlu olude ... khetha SimObjects, ukhethe iinqwelomoya .... Nantsi apho inqwelo yakho yeFSX igcinwa khona ... fumana i-moya oyifunayo kwiluhlu..fayile ifayile kwaye kuloluhlu moya cfg Le yifayile yeCFG. ukuba ufuna olunye uncedo ndizise. Kuya kuba kuhle ukwazi ukuba yiyiphi intsingiselo yeefestile. Ekubeni ungakaze uvule ifayile ye-cfg phambi kokuchofoza ngakwesokudla kwaye ukhethe uvule "umyalezo [/ umbala]"
Nasi umzekelo wecandelo oya kukhangela:
Ndalususa oku kwi CRJ-700
I-1 unyaka we-6 iintsuku ezidlulileyo #964 by superskullmaster
Ndinepakethe yokuphucula ukusebenza eyenzela konke. Ngokukhawuleza nje xa ndifumana indlela yokuyilayisha yona ndiya kuyenza.
Ixesha ukwenza page: 0.370 imizuzwana